ပိုကြီးတဲ့ ဘက်ထရီ၊ ပိုများတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ အတူ မြင်တွေ့လာရမယ့် 2023 Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid ! – MyMedia Myanmar
Mitsubishi အနေနဲ့တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက All-New Outlander အသစ်ကို ချပြမိတ်ဆက်ခဲ့ ပေမယ့်လည်း Plug-In Hybrid Version တော့ မပါဝင်ခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယခင် PHEV Model အဟောင်းရဲ့ သက်တမ်းကလည်း သိပ် မကြာသေးတာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် သာမန် Powertrain တွေနဲ့ ပြန်လည် ဆန်းသစ် ထားတဲ့ SUV တို့နဲ့ အတူ ဟန်ချက် ညီညီ အသုံးတည့် နေ သေးလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆိုပါ ကားအသစ်ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Hybrid ကို မိတ်ဆက်ဖို့ရာ အချိန်ယူရ‌နိုင် သေးပေမယ့် Teaser တစ်ချို့တော့ စတင် ထွက်ပေါ်လာ နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကိုတော့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂျပန်မှာပဲ စတင် ရောင်းချဖို့ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ယခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဖြစ်တဲ့ ဧပြီ ၂၀၂၁ ကနေ မတ်လ ၂၀၂၂ အကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ နောက်နှစ်ရဲ့ ဒုတိယ နှစ်ဝက် ကာလလောက်မှာ အမေရိက ဈေးကွက်ထဲယူဆောင်လာဖို့ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကို ပိုစိတ်ဝင် စားလာ စေဖို့ အတွက် Outlander PHEV ရဲ့ Teaser ပုံရိပ် ၂ ခုကို ချပြခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ကားရဲ့ အားသွင်းပေါက်နဲ့ Tailgate နဲ့ အရှေ့ဘက် Fender ဆီက တံဆိပ်နေရာတို့ကို ဖော်ပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကားမှာ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမြင့်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ပိုကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီကို ထည့်သွင်း ပေးလာမယ် ဆိုတာက လွဲလို့ အခြားသော ဘယ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုမှ ချမပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် ကားကတော့ အခု လက်ရှိမော်ဒယ်ကိုပဲ အဆင့်မြှင့်တင်ကာ ပွဲထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လအနည်းငယ်ကပဲ မိတ်ဆက် ခဲ့ကာ 2.4 Liter Gasoline Engine ကို အသုံးပြုထားပြီး ယခင်သုံးနေကျ 2.0 Liter Unit ကို တော့ ထားရစ်ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါအင်ဂျင် အသစ် နဲ့ အတူ 126 hp (94 kW) နဲ့ 148 lb-ft Torque (201 Nm) အထိ ကို စွမ်းဆောင် ထားနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်က လျှပ်စစ်မော်တာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ 94 hp (70 kW) ရှိတာကြောင့်ကား တစ်စီးလုံးရဲ့ စုစုပေါင်း စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဆိုရင် 221 hp (165 kW) အထိကို ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ 2021 Outlander အမျိုးအစားကို စတင် ထွက်ရှိခဲ့တုန်းက ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ယခင် 12 kWh ကနေ 13.8 kWh အထိကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ရလဒ် ပိုင်းကတော့ All-Electric Range အနေနဲ့ ၂၄ မိုင် (၃၉ ကီလိုမီတာ) အထိ တိုးတက်လာခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် အင်ဂျင်နီယာတွေ ကလည်း ကားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို EV Mode မှာ တင်မြှင့်တင် ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပြီး 83 mph (134 km/h ) ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အစားထိုး စွမ်းဆောင်လာနိုင်မှု တွေကြောင့် ကားကို မတူညီတဲ့ SUV အဖြစ် ဆွဲတင်သွားနိုင်တာ ဖြစ်ပြီးတော့ သာမန် Outlander တစ်စီး နဲ့ တူနေတဲ့ Nissan Rogue ထက်တော့ ကွဲပြားသွားတော့မှာ သေချာပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ Plug-In Hybrid Setup နဲ့ ထိုင်ခုံ ၃ တန်းပါ ကားကို ပေါင်းစပ်ပြီး လိုချင်မယ်ဆိုရင်တော့ အခု 2023 Outlander က အံကိုက် ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း အခြေခံဖန်တီးမှုအသစ် တွေနဲ့အတူ ပို‌မိုကောင်းမွန်တဲ့အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအရပါ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာမယ် လို့လည်း ကုမ္ပဏီဘက်က ဆိုထားပြီး ပထမဦးဆုံး Version ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က မိတ်ဆက်ခဲ့တုန်းကနဲ့ ဘာမှကို မဆိုင်တော့ လောက်အောင် မောင်းနှင်နိုင်မယ့် Range ကလည်း အတော်လေး ကွာခြားသွားလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ PHEV Model ဘယ်အချိန်လောက်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကို Mitsubishi ဘက်ကနေ အတိအကျ ထုတ်ဖော် ပြောထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း ဈေးကွက်အတွက် ကားကိုတော့ လာမယ့် လပိုင်း လောက်မှာပဲ အရင် မြင်တွေ့လာရ တော့မယ်လို့ မျှော်လင့် ရပါတယ်။
The post ပိုကြီးတဲ့ ဘက်ထရီ၊ ပိုများတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ အတူ မြင်တွေ့လာရမယ့် 2023 Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-07-30T14:31:58+06:30July 30th, 2021|MYCARS MYANMAR|